Aya ndiwo maonero angu paKdenlive uye Openshot, vaviri vhidhiyo edhita | Linux Vakapindwa muropa
Musiyano mukuru pakati pemahara software nepropetiary software ndiyo huwandu hwezvinhu zvinowanikwa mukusimudzira. Kwete chete kuronga ruzivo kunodiwa, asiwo nezve izvo zvido zvevashandisi zvakagadzirirwa ivo.
Isu tese tinoziva zvatinoda kubva kune vhidhiyo player kana izwi processor. Asi, cKana zvasvika kune chaiwo zvigadzirwa sezvakaita chirongwa cheCAD cheinjiniya yemuchadenga, nyanzvi yekufungidzira yekuongorora system kana, mune vevhidhiyo edhita, zvinodawo kuziva zvinodikanwa zveindasitiri.
Vakuru vemutemo zviri kwatiri isu vanoita ongororo. Ini ndashandisa Adobe Premiere Pro, asi kwete padanho rehunyanzvi vhidhiyo mupepeti, saka zvandinotaura muchinyorwa chino maonero akasarudzika.
Ngatione chirevo chakaitwa na ccantor chinyorwa changu chekare:
Mhoroi, muchokwadi ivo vanoshandiswa kugadzira magungano madiki, zvinosuwisa havaswedere padhuze nehunyanzvi masystem uye kana ini ndaedza kuita chimwe chinhu chinogadzira, vanokundikana mune zvese zvinobvira Avo vedu vanoshandisa yemahara software vane hukomba nezvekushaikwa kweiyo vhidhiyo yekugadzirisa chirongwa icho chiri chokwadi vimbiso yekuita rakakomba basa, remhando yakanaka danho.
1 Zvakanakisisa uye zvakaipisisa zveumwe neumwe
2 Aya ndiwo maonero angu pazvirongwa zvese izvi
Zvakanakisisa uye zvakaipisisa zveumwe neumwe
Uku kuenzanisa nevashambadziri vasiri vepara edhisheni kwakanyanya kuomera Kdenlive chii OpenShot. EChechipiri hachina kumbova nezvakawanda zvekuda pane kuve nyore kushandisa. Kushamwaridzana neBlender neInkscape kunoipa yakakura kwazvo mifanikiso uye yayo icon-yakavakirwa mushandisi interface iri nyore kwazvo kunzwisisa.
OpenShot ine template-based animated zita wizard.
OpenShot chirongwa cheavo vanoda kurodha mavhidhiyo kumasocial network uye vanogutsikana nesarudzo dzekutanga dzekugadzirisa uye nehunhu hwakaringana hwemhedzisiro uye shanduko.
Icho chiri muchikamu chimwe chete seAdobe Premiere Rush.
Chimwe chinhu chakarasika kugona kuburitsa zvakananga kuYouTube uye pasocial network. Zvisinei, icho chinhu chakange chisina kushanda mushe. Mukurongeka, hazvishande zvakanaka muPremiere Rush futi
Iyo huru poindi mukufarira kwaKdenlive (zvakare, chiono changu) ndechekuti ine chaizvo inogadziriswa mushandisi interface.
Kdenlive inokutendera iwe kuti uchinje maitiro eazvidhori uye nemusoro weruvara
Ini pachangu, ndinonzwa kusununguka kushanda nemamenyu ekudonhedza pasi uye mapfupi ekhibhodi pane pane mbeva, uye iwo ari muKdenlive anonyatsochinja
Kusiyana neOpenShot, iyo inoda kumisikidzwa kwezvirongwa zvekunze zvekugadzira mazita ehupenyu, Kdenlive ine yayo. Kushandiswa kwaro kunoda imwe hunyanzvi uye kuyedza uye kukanganisa sezvo pasina nzira yekuona kuti inosangana sei nevhidhiyo clip kusvikira yapindirwa.
Mupfungwa iyoyo, vabatsiri veOpenShot, kunyangwe vasina mikana yakawanda, zvakare inoderedza marginal yekukanganisa.
Nekudaro, iwo magiraidhi uye grid zvinobatsira kwazvo.
Chinhu chimwe chete chandaida pamusoro peKdenlive ndechekuti paunopinza vhidhiyo vhidhiyo nezwi, rinovaparadzanisa, iyo OpenShot isingaite yega.
Ndine tarisiro diki, uye izvo zvinoita kuti kushanda nemakwara mazhinji uye pamwe nemhedzisiro yeKdenlive uye marongero ekuchinja zvishoma kunetsa. Zvakare, ndinokuyeuchidza kuti ndiri kunyora chinyorwa ichi kubva mumaonero angu.
Kupfuura izvozvo, mushure memaminetsi mashoma ekudzidzira, uye kuverenga bhuku racho pazvinenge zvichidikanwa, kuwedzera mhedzisiro uye shanduko zvinova nyore.
Ini ndinoona kuti vamwe vaongorori vanoshaya Kdenlive rutsigiro rwemamwe mafomati seMKV, MOV neAVI. Ichokwadi, kusiyana neOpenShot haichitsigire. Zvichida ivo vanofanirwa kutarisa pazvinhu izvozvo kupfuura kuve neshanduro yeWindows, iyo zvinoenderana nevanoongorora imwechete haina kugadzikana.
Izvo zvakare haina kuita seWindows isipo yemahara evhidhiyo edhita.
Aya ndiwo maonero angu pazvirongwa zvese izvi
Zvichida chirevo chakapa kubvunzwa kwemuverengi wandakaedza kupindura nezvinyorwa izvi, chaive nenjodzi. Kdenlive ine zvimwe zvinhu kupfuura OpenShot (Semuenzaniso, kutora mavhidhiyo kubva kune yekunze kamera) Asi, haitsigire mafomati mazhinji uye mune zvimwe zvinhu zvakati omei kushandisa.
Chinhu chakarurama kutaura kuti vane vateereri vakasiyana. Kana iwe uchida kugadzirisa mavhidhiyo usingaomeswe zvakanyanya nekugadzirwa, OpenShot chirongwa chako. Kana iwe uchida zvimwe kutonga pamusoro pehunyanzvi zvinhu, iwe unofanirwa kunyatso kupa Kdenlive kuyedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Uku ndiko kutora kwangu paKdenlive uye Openshot, maviri evhidhiyo edhita
Kdenlive inotsigira mafomati mazhinji seOpenshot nekuda kweinotevera:
Kuvhura kunoenderana mukati me python3-openshot, iyo inoenderana ne ffmpeg's libav * maraibhurari. Asi Kdenlive zvakare zvinoenderana nemaraibhurari aya. Naizvozvo, mupfungwa iyoyo ivo vanowirirana.
Kune rimwe divi, mkv, mov uye avi zvinotsigirwa muKdenlive, sezvo iri ffmpeg anoitarisira;)
Mhoro. Ndatenda nekutaura kwako
Hapana chimwe cheizvi zvitatu chinowanikwa mune rondedzero yemafomati mavanogona kuendeswa kunze. Pamwe handina kujekesa izvo zvakakwana mumashoko
Chaizvoizvo, kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu chehunyanzvi, pane Cinelerra. Yaro yekudzidzira curve uye zviwanikwa zvainoda zviri zvakare padanho rehunyanzvi kunyorera :-)
Iko kune yeruzhinji vhezheni.
Kune mamwe mashandisirwo asingaverengeke muLinux anoita chimwe chinhu kunyanya mukugadzirisa vhidhiyo uye kuti kana ikashandiswa pamwechete, vanokutendera kuti uite yakawanda yevhidhiyo uye odhiyo yekugadzirisa mabasa (ndinofunga ndiyo yaive yekutanga Unix uzivi).
Kune akatiwandei enharaunda shanduro dzeCinelerra
Cinelerra CG: Kukurumidza kuvandudza, vhezheni nyowani mwedzi wega.
Cinelerra CV: Inotarisa kugadzikana.
Cinelerra CVE: Forogo yeiyo yapfuura.
Ini pachangu, ini handizive chero munhu anovashandisa achienderera.
Nekuda kwekuda kuziva, chii chaunoona muCinelerra icho Kdenlive isina?
Nehurombo, paLinux, iyo yega nyanzvi vhidhiyo yekumisikidza sarudzo kunze uko ndeyekupokana, senge DaVinci Resolve kana Lightworks. Mamwe ese maremagnum emapurojekiti akasiyana anoedzesera kunge nyanzvi, uye pachinzvimbo chekuuya pamwechete kuti vave neimwe nzira yakakomba, vanokanda yega yega kudivi ravo. Izvozvi, izvo zvandinoziva uye nehunyanzvi hwekunyepedzera pane:
Chokwadi ndakasiya zvimwe munzira….